Home News Trump oo Turkiga kabaqay kana Qaaday cunaqabateyntii uu horay u saaray
Madaxweyne Trump ayaa ku dhawaaqay in dhamaan cuna qabateynadii la saaray Turkiga oo la xiriirtay weerarkii Turkigu ku qaaday deegaanada xoogaga kurdiyiintu haytaan ee waqooyi bari suuriya la qaaday
Go’anka Trump ayaa imaanaya ka dib markii Turkigu uu ogolaaday inuu xabad joojinta waqooyiga Suuriya sii wadayo
Isaga oo ka hadlayay Magaalada Washintoon ayuu sheegay Mr Trump in Dolwadda Turkiga ay u balan qaaday in ay joojinayso howgallada ay ka wado waqooyiga Suuriya.
Waxa uu yiri :”Aroortii hore ee saaka dowladda Turkiga ayaa waxey maamulkayga u shegeen inay joojinayaan gulufkii ay ka wadeen Suuriya ayna heshiiska xabad joojinta ka dhigayaan mid toos ah”.
”Marka sidaa drteed waxaan la hadlay Xoghayaha Maaliyadda waxaana u sheegay in Turkiga laga qaado dhammaan cunaqabateenadii la saaray 14-kii bishaan Octobar aynu ku jirno taasi oo jawaab u ahayd tallaabadii Turkiga ee ka dhanka ahayd kurdiyiinta waqooyi bari ee Suuriya”, ayuu yiri Trump.
Turkiga ayaa weerarka waqooyiga Suuriya billaabay kaddib marki uu Mareykanku ku dhawaaqay in uu si lama filaan ah uu ciidamadiisa uu ula baxayo. Iyada oo ay ciidamada Mareykanka ay gacan siinayeen xoogagga kurdiyiinta, ee Mareykanka xulafada kula ahaa dagaalkii lagula jiray ururki Daacish ee gobolkaasi ka dagaallamayey.
”Cunaqateenada waa la qaaday marka ilaa aan ka aragno waxyaabo aanu ku faraxsanyn ee gobolaasi ka dhaca ma jiri doonaan cuna qabateynno kale”, sidaasi waxaa hadalkiisa ku sheegay madaxeyne Trump.